တစ်နေ့တစ်နေ့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရာ ကဏ္ဍအလိုက် Uptodate ဖြစ်တဲ့သတင်းတွေကို ရှာဖွေ ဖတ်ရှူ့ရတာလည်း အလုပ်တစ်ခုပါပဲ။ အဲလို ဖတ်နိုင်ဖို့အတွက် သတင်းတွေကို ဘယ်လိုရှာဖွေလဲ၊ ဘယ်နေရာတွေကနေ ဖတ်လည်း ဆိုတာကလည်း အရေးကြီးလာပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်း အင်တာနက်ကြည့်ပြီဆိုတာနက် ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ သတင်းတွေရှိရာကိုပဲ အရင်ဦးတည်သွားတတ်ပါတယ်။ သတင်းတွေရှာဖွေပုံကတော့ လူတိုင်းမှာ နည်းမျိုးစုံရှိကြပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်လုပ်နေကျ နည်းလမ်းတွေကို မျှဝေချင်ပါတယ်။
အကြိုက်ဆုံး site/blog တွေရဲ့ Feed တွေကို သုံးနေကျ GoogleReader မှာ subscribe လုပ်ထားပြီး ဖတ်တယ်။ Reader နဲ့ဖတ်တဲ့အတွက် ကိုယ်ဖတ်ချင်တဲ့ ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် တွေ့နိုင်သလို အချိန်ကုန်လည်း သက်သာပါတယ်။
Technoratic Tob Blog တွေကို အမြဲတမ်းစောင့်ပြီး ဖတ်ရှူ့ပါတယ်။ အကုန်လုံး မဖတ်နိုင်ရင်တောင် ကိုယ်အကြိုက်ဆုံး ၁၀ခုလောက်တော့ ရအောင်ဖတ်လိုက်တယ်။
Digg, Delicious နှင့် Netscape တို့မှာ လူကြိုက်အများဆုံး Bookmark အလုပ်ခံရဆုံး ပို့စ်တွေကို သွားပြီးဖတ်ဖြစ်တယ်။
Youtube နှင့် Google Video ကိုတော့ နှစ်ရက်တစ်ခါလောက် သွားကြည့်ဖြစ်တယ်။ Account ဖွင့်ထားတဲ့အတွက် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Video တွေ့ရင် Favorite ထဲကို ဆွဲထည့်လိုက်တယ်။
Microsoft, Apple, Google, PCWorld စတဲ့ နည်းပညာနဲ့ ပက်သက်တဲ့ website တွေကိုလည်း မကြာမကြာ သွားဖတ်ဖြစ်တယ်။
တစ်ခြား CNN, BBC စတဲ့ website တွေကိုတော့ reader ကနေတစ်ဆင့်ပဲ ဖတ်ဖြစ်တယ်။ reader မှာ အဲဒီ site တွေက auto ပါပြီးသားဆိုတော့ ဘာမှ ထပ်လုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူး။
အခုနောက်ပိုင်း Desktop Feed Reader ကိုသုံးပြီးတော့လည်း ဖတ်ဖြစ်တယ်။ အကြိုက်ဆုံး တစ်ခုကတော့ Newsgator ရဲ့ FeedDemond 2.5 ပါပဲ။ သူ့ရဲ့ Features နဲ့ Requirements တွေကတော့
New Version! Top new features in FeedDemon 2.5:
Synchronized news bins with shared RSS feeds
Improved "Popular Topics" feature
"Who's linking here?" added to each post inanewspaper
Microsoft Internet Explorer 6.0 ® or later
Download : Feeddemon 2.5.0.10
ကျွန်တော့်ရဲ့ Technique တွေကတော့ အဲဒါပါပဲ။ မိတ်ဆွေလည်း ဘယ်ပုံ ဘယ်နည်း သတင်းတွေရှာဖွေ ဖတ်ရှူ့တယ်ဆိုတာကို sharing လုပ်သွားပေးပါဦး။ မသိသေးတဲ့သူတွေလည်း သိသွားအောင်၊ သိပြီးသားသူတွေလည်း ပိုပြီး ပြည့်စုံသွားအောင် မျှဝေသွားလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
Updated (11.June) : How to use RSS Feeds ဆိုတဲ့ Video လေးကိုလည်း လေ့လာကြည့်စေချင်ပါတယ်။
Updated (13.June) : Mashable မှာပါတဲ့ The Ulimate RSS Tool Box ဆိုတဲ့ပို့စ်လေးလည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်။ RSS နဲ့ပက်သက်ပြီး ဗဟုသုတ တော်တော်ရပါတယ်။
Tags: feeddemon, find news, how to, feed reader, desktop feed reader
ahmeisoekyi 11:04 pm
cool fri, really appreciate it.
thanz for sharing suchavaluable info to all readers.
Myo Kyaw Htun 2:18 am
Nice post , keep it up . :P Thanks much for sharing
CMS 3:14 am
ahmei, MKT ... welcome and thx for your comments . why don't u share ur way? :)
Myo Kyaw Htun 3:30 am
you know my problem, that's why I can't now. but one day pop :)
CMS 3:32 am
MKT ... ic hope it'll be fine soon :)
Sai Linn Thu 4:14 am
cheers! doh ka tot google nae pae shar tat tae...ta char har tot thi bu..min pyaw ma di lo tway shi man thi ya tar...thanks you ...thanks you..good..pa..byar..
welcome slt :)
မျက်လုံး 11:06 pm
ကိုချမ်းမြစိုးခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်အစ်ကို့ ဘလော့ဂ်ကို နေ့တိုင်း ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်လည်း ဗဟုသုတရပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်မှာကွန်မန့်ပေးပြီး ပြောသွားတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ..
MELODYMAUNG 12:33 pm
Thanksamillion for this useful post.
Elaine Vigneault 11:50 pm
your blog has been added to 2k bloggers